Ezama ukuqeda inkolelo yokuthi isayensi inzima, uDkt Naven Chetty ovela esikoleni sakwaChemistry nePhysics e-UKZN esizwa abafundi ababili abenza izifundo zeMasters uMnu Sphumelele Colin Ndlovu nuMnu July Teboho Bell, bakhombise abafundi izinto ezenza isayensi ibe mnandi nabakwaziyo nabo ukudlala kuzona.
‘Abafundi bathole lezizikhangiso zijabulisa futhi zibanika ulwazi,’ kusho uChetty. ‘Ibanika ulwazi olungconywana ngokuthi isayensi iyini kahle nokuthi abakaze bakhonjiswe izikhangiso zesayensi ngenxa yokungabi nansiza zifundo ezikoleni. Ngenza lezizikhangiso ukuheha abafundi nokubenza bathande lomkhakha.
‘Yebo abafundi bezesayensi bancane eNingizimu Afrika okwenza sikhuthaze abafundi abanye ukuthi bafunde imfundo ephakeme kwezocwaningo.’
Usuku lonke bekukhona izikhangiso nezinto abangazenza e-UKZN, ulwazi ngempilo yaseNyuvesi emakolishini ahlukene nezindlela zokungena e-UKZN ukuze kunikeze abafundi ukuhamba phambili ezintweni abafuna ukuzenza nokuthi bafike kanjani kuzona.
OyiGuidance Counsellor eZwelibanzi High School uNkk SE Chili ukhulume ngokujabulela kwakhe lolusuku. ‘Njengesikole esibheke khakhulu izifundo zeMaths neSayensi, lokhu kuyithuba elihle lezingane zethu. Abaningi baba sesikoleni ngokugamanxa kwehora lesithupha ekuseni bahambe ngehora lesishiyagalombili ebusuku. Bazinikele ekufundeni kwabo, nokuvakashelwa i-UKZN ikhombisa uxhaso esinalo.’
Ephothula usuku uChetty uthe: ‘Konke kuqala esikoleni. Uma singaqeda lombono wokuthi isayensi inzima nokuthi awukho umsebenzi singanqoba ekukhiqizeni abafundi abaningi bezesayensi. Lokhu futhi kuyindlela nathi esisiza ngayo intsha yethu ngoba ilona kusasa lethu.’